MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA CUNSURIGA AH EE AUSTRALIYAANKA AH - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Cunsuriga ah ee Australiyaanka ah
Adhijirka Ustaraaliya / Dhallashada Dahabka ah ee Eyda ah
Roxie, oo ah qof weyn oo Australiya ah oo Retriever ah oo jira 1 sano, ACHC ayaa diiwaangashan. Lahaanshaha sawirka Amy Lawson
bulxan buluug ah oo cadcad
Dhalashada Dahabka ah ee Australiya
Asiiniya Dahabka Aussie
Australian Retriever ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Adhijirka Ustaraaliya iyo Dahab dahab ah . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Mack oo 10 bilood jir ah Mack waa ACHC-ka ka diiwaangashan Australian Retriever. Lahaanshaha sawirka Amy Lawson
Maaddaama aan ahay kii ugu horreeyay ee naqshadeeya, magaca iyo diiwaangelinta Qofka Australiyaanka ah ee loo yaqaan 'Retriever' ee 'ACHC', waxaan jeclaan lahaa inaan sheego sheekada sida ay wax walba ku billowdeen. Waxaan soo saarey Soo Celinta Dahabiga ah tan iyo 1980 iyo sanadihii ugu dambeeyay waxaan go'aansaday inaan helo Adhijire Australiya ah oo ka caawiya xoolahayga. Waxa aan ogaadey wuxuu ahaa ninka labka madow ee reer Australia ee Shepherd wuxuu ahaa weheliye aad iyo aad u caqli badan. Marka, si aan sheeko dheer uga dhigo, Oktoobar 2007, waxaan si ula kac ah ugu dhajiyay sedexda nin ee madow ee Australian Shepherd ilaa 3 ka mid ah haweenkayga AKC Golden Retriever. Dabayaaqadii Diisambar 2007, waxaan helay qashinkii ugu horreeyay: 2 madow iyo caddaan ama midab madow iyo 2 midab madow. Labada qashin ee kale waxay yimaadeen Janaayo 2008. Way fiicnaayeen! Weligey maahan eyyo si fudud wax u barta! Markay 4 toddobaad jireen eeydu waxay isticmaaleen albaab guga eyga kaligiis ku raran yahay. Waan rumeysan waayey oo waxaan u maleeyay inay hooyadu albaabka ka caawinayso markaasaan fadhiistay oo aan fiirsaday waxaanan ogaaday inaanay gargaar uga baahnayn hooyo! Ereygu wuxuu ku wareegsan yahay inaan naqshadeeyay iskudhaf cusub oo aan dhammeystiray dhammaan waraaqaha si aan uga diiwaangaliyo ACHC dhawaana waxaan u diray eeyo yaryar guryo cusub. Jawaabta beeshan cusub waxay ahayd mid lala yaabo! Qaar ka mid ah faallooyinka waxay ahaayeen 'aad ufudud in la kala saaro,' 'aad u addeecid,' 'raaxo,' 'deganaan,' iwm. Waxaan ogaaday in dadka wax ka soo celiya Australia aysan aheyn kuwo dalbanaya feejignaanta qofka isla markaana ay ku kalsoon yihiin inay ku dhow yihiin. Sidoo kale waxay aad uga feejigan yihiin waxa 'dadkooda' ay sameynayaan waxayna umuuqdaan inay dareemayaan wax isbedel ah ama wax kaduwan guriga. Sida Goldens, Australiyaanka dib u soo celinta jecel qof walba! ' Mahadsanid Amy Lawson
Kani waa Roxie, oo ah cunug yar oo reer Australia ah oo 7 toddobaad jira. Lahaanshaha sawirka Amy Lawson
Qashin ka-cunista Australiya ciyaal isku dhafan at 10 toddobaad jir wareegsan yahay Mack. Lahaanshaha sawirka Amy Lawson
'Kani waa Wyatt, eeyaha aan uhayo Australiya ee 12 toddobaad jirta. Wuxuu ka yimid qashin si lama filaan ah uga soo baxay beer faras shaqeysa. Aabihiis wuxuu ahaa adhijir reer Australia ah oo saafi ah ayaa loo isticmaali jiray xaynta adhiga hooyadiisna waxay ahayd a purebred Golden Retriever oo loo adeegsaday ugaarsiga . Isagu waa eey dhexdhexaad ah oo adag. Koodhkiisii ​​ayaa si wanaagsan u soo galaya waxaanan bilaabay inaan arko baalasha. Wuxuu jecel yahay inuu tago socod subax brisk oo kubad ciyaar. Wyatt wuxuu kaloo bilaabay inuu nagu soo biiro socodka qoysaska eeyahayaga oo xitaa wuxuu ku raaxeeyaa dabaasha! Isagu waa eey yar oo layaableh waana ku faraxsanahay inaan helnay! '
Wyatt, cunuggeyga Australiyaanka ah ee Retriever ee jira 12 toddobaad
'Azula waa farac ka mid ah hooyada Australiyaanka ah ee Adhijirka ah ee diiwaangashan iyo aabe diiwaangashan oo ah Golden Retriever. Labaduba waxay ku noolaayeen beer ku dhow Sharon, PA. Waxay ka mid ahayd 8 arday - badanaa madow dhawr meer oo buluug ah, sida Azula. Tani waa iyada sida eey. '
Azula the Australian Retriever oo 10 bilood jir ah
waxa taranka ka dhiga teri dibi
'Ku saabsan eeykeyga Cooper, Adhijirka Ustaraaliya / Dahab dahab ah isku dhafan (Australian Retriever Hybrid): Waxaan ka helay hoy badbaadinta eey / guri lagu koriyo oo ku yaal Modesto, Kaliforniya, Juun 4, 2005. Wuxuu ahaa 9 toddobaad markii aan helay, isaga oo taariikhda dhalashadiisa ka dhigaya agagaarka 31-ka Maarso, 2005. Full koray hadda, Cooper wuxuu culeyskiisu yahay 92 lbs. (sida booqashadii dhakhtarka xoolaha ee ugu dambeysay), sidaa darteed xaqiiqdii waxay ku dhowdahay Dahab ka weyn cabirkiisa Aussie-dahab weyn. Xaqiiqdii, mararka qaarkood dadku waxay jecel yihiin inay ciyaaraan 'waxa kale oo uu noqon karo, isagu waa weyn yahay' ciyaarta, laakiin sida ku xusan hoyga badbaadinta, hooyadiis waxay ahayd da 'yar dahabi ah aabihiisna wuxuu ahaa Aussie. Waxa kaliya ee aan ogahay hubaal waa inuu yahay eey weyn! Cooper waa mid aad u caqli badan, laga yaabee inuu aad u caqli badan yahay, hadaad ogtahay waxaan ula jeedo. Xaqiiqdii wuxuu leeyahay dareenka Aussie herding, oo soo baxa markuu la ciyaarayo eeyaha kale, ama uu arko xayawaan kale oo aan u socon meeshii uu isleeyahay waa inay ahaadaan. Wuxuu kaloo jecel yahay dabaasha wuxuu dhex gali doonaa biyaha xitaa markay tahay 50-meeyada oo inta kale ee maanka fayow ee adduunka isku dayayaan inay diirimaad helaan. Wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro barafka, sidoo kale! Isagu waa dhul, wuu ka daalay shisheeyaha aadna wuu ilaaliyaa. Shisheeyaha ku soo dhowaada gurigeyga ama meel kasta oo kale Cooper waxay tixgelisaa 'inuu' ku ciyo. Dhab ahaantii, wuu ciyeystaa dhib malahan cida guriga imaaneysa, xitaa haduu yaqaano iyaga, waxay ku kala duwanyihiin ayaa ah dabadiisa oo lulaysa haday saaxiib tahay. Xayawaanada aan la aqoon looma oggola inay ii soo dhowaadaan kahor intuusan OK siinin. Markuu qofku sameeyo, wuu naga dhexeeyaa oo wuxuu u dirayaa iyaga oo leh jilif gaaban, ka dibna qaylo haddii aysan helin. Markuu barto iyaga ka dib, waa loo oggol yahay inay ila soo booqdaan, laakiin wuxuu u muuqdaa inuu garanayo kuwa aan u malaynayo inay isaga u dhow yihiin oo wuu yara hinaasi doonaa haddii aan fiiro gaar ah u yeesho, sidaas darteed mar walba hubi inuu helayo jacayl badan sidoo kale. Waxaan u maleynayaa inaan isaga dhacayo, laakiin ma caawin karo, waan jeclahay isaga! Sidoo kale isagu aad uma faraxsana marka ragga aan la garanayn ay ii soo dhowaadaan, laakiin umma muuqdaan inay dumarka tixgelinayaan. Haddiise qof waligiis daaweyn siiyo, isagu wuu jecel yahay nolosha, wuuna xusuusan doonaa qofkaas xitaa haddii uusan dib dambe u arki doonin in muddo ah. Tusaale ahaan, waxaan la kulanay nin la jecel yahay Buurta Bernese Beerta eyda maalin maalmaha ka mid ah, iyo Cooper ayaa jeex jeexay jeebkiisa halkaasoo uu ku hayay daaweyntiisa, ka dibna adeecsanaa wuu fadhiistay (wuxuu bartay hal soon). Dabcan ninku wuu iska caabin kari waayey wajigaas macaan ee kor u fiirinaya asaga oo filaaya. Cooper waa saaxiibkiisa ugu fiican hadda waxayna ugu yaraan bil ahayd inta udhaxeysa markii ugu horeysay ee uu daweeyo Coops, iyo marka xigta ee aan markale aragno. Cooper wuxuu leeyahay naaneysyo badan, dhammaantoodna wuxuu uga jawaabaa: Coops, Coop-a-loops, Baby-boy, Swooper, Cooper Super Duper, Puppy-dog, Coopster. Laakiin had iyo jeer waa 'Cooper' marka uu galayo xumaanta, taas oo uu inta badan sameeyo. Waa dhuumaaleysi umana muuqan karo inuu ka fogaanayo daasadaha qashinka, gaar ahaan haddii ay cunto ku dhex jiraan! Laakiin inta badan isagu waa malag. Isagu waa madax-bannaan yahay, taas oo fiican, laakiin isla markaa, aad u jecel oo daacad ah. Isaga ayaa si qurux badan iila socon doona guriga oo dhan. Wuxuu qaadan doonaa dareenka haddii aad siineysid, laakiin sidoo kale wuxuu gebi ahaanba iska indhatirayaa gacan fidis ah marka uu socdo qof isku dayaya inuu xayawaan ka dhigto. Waxay u egtahay sida been abuur banaanka ka soo baxay, wuxuu umuuqanayaa inuu kugu soo socdo adiga, ka dibna wuu iska leexan doonaa ilbidhiqsiga ugu dambeeya. Wuu ka fogaan karaa, waxaan u maleynayaa, laakiin run ahaantii aniga ahaan maahan. Waa nin qosol badan oo aad iiga qosliya, gaar ahaan marka uu galo qaab ciyaareed aad u weyn, oo wali dhacda marar badan. Majiro wax kafiican gurigeyga oo u imaado eeykeyga oo gadaal gadaal gadaalkiisa ka ruxaya, dabadiisa, iyo sameynta codkiisa 'Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku arko' codkiisa, oo runti u eg inuu hindhisayo, laakiin wuxuu kaliya sameeyaa markii aan guriga ku noqo Ma weyddiisan karin wehel wanaagsan waxaanan rajeynayaa sanado badan oo aan la joogo saaxiibkeyga ugu fiican Cooper. '
Cooper the Australian Shepherd / Golden Retriever puppy at 9 toddobaad jir (Australian Retriever)
'Sawirkan, iyo kan kore, waa maalintii ugu horreysay ee aan helay, isagoo jira 9 toddobaad. Wuxuu lahaa indhaha eey-eyga hoos, hubaal. Wuu seexan jiray isagoo madaxiisu ku jiro weelalkiisa biyaha markasta, waanan ka walwalsanaan jiray inuu isagu isqarxiyo, laakiin waxay ahayd xagaa kulul oo waxaan filayaa inuu kaliya isku dayayay inuu qabow sii ahaado. Nin liita oo miskiin ah ayaa waxaas oo dhan qaba oo kulul xagaaga California. Waxaad arki kartaa inuu dhowr dhibic uun bilaabayo inuu ka muuqdo wajigiisa, iyo dhogorta ku wareegsan isha iyo dhagaha hoostiisa ayaa runtii mugdi ah. Waxaan jeclaa uun sankiisa yar, badankiisna casaan leh dhibco madow. Waxaan xasuusiyey sac yar.
Waa kan Cooper qiyaastii 11 ½ toddobaadyo, oo ah meesha uu ugu jecel yahay guriga saaxiibkay (intuu weli halkaa ku habboon yahay, ugu yaraan). Wuxuu jeclaa inuu jiifo halkaas maxaa yeelay way ka qabowdahay dhammaan roogga meel kasta, oo lagu daray waxaa jiray qoryo lagu calaliyo! Wuxuu had iyo jeer jiifay leben, ama linoleum, ama dusha sare oo xoogaa ka qabow kuwa kale. '
Cooper the Australian Shepherd / Golden Retriever Hyppy puppy at 11 ½ toddobaad jir (Australian Retriever) - 'Waa kan sawirka Cooper oo runtii u muuqda mid qurux badan! Da'daan qoob-ka-ciyaarka ayaa bilaabay inuu muujiyo wax badan oo dhogortiisa madow ayaa hadda bilaabay inay yara yaraato. Sidoo kale, casaankii sankiisa ayaa bilaabay inuu noqdo madow. '
Cooper the Australian Shepherd / Golden Retriever Hyppy puppy at 13 toddobaad jir (Australian Retriever)
'Sawirkani waa laga soo bilaabo 4-tii bisha Luulyo dhammaadkeeda ee Big Sur, CA, bil kadib markii aan helay Cooper. Taasi waa aniga oo isaga la socda. Wuu qoday, sidaad u malayn karto. Runtii wuxuu jecel yahay inuu wax qodo, sidaa darteed ciiddu way ku riyaaqdaa isaga maxaa yeelay wuu ogyahay in loo oggol yahay (si ka duwan markii lagu qabtay isagoo qodaya qof daaraddiisa). '
'Cooper oo ku dul lugeynaya webiyada. Wuxuu joogaa qiyaastii 13 toddobaad. Jaangooyooyinkiisa ayaa runtii muujinaya hadda, shakhsiyaddiisuna runtii waxay bilaabaysaa inay sidoo kale soo baxdo, waana dabeecad ahaanba. Waxaan haystay ilaa 4 ama 5 qof oo aan kala sooc lahayn oo i joojiya oo i weydiiya inay sawir ka qaadi karaan eeyga. Dabcan, waxaan idhi haa.
'Kani waa Cooper, oo lagu muujiyey halkaan isagoo jira 9 bilood. Isagu waa isku-duwaha Australiyaanka ah ee 'Shepherd / Golden Retriever'. Wuxuu culeyskiisu yahay 75 rodol, madaxa korena wuxuu taagan yahay qiyaastii 28 - 30 inji oo dhulka ah (sii ama qaado hal inji) Hooyadiis waxay ahayd Dahab aabihiisna wuxuu ahaa Aussie. Isagu waa eey aad u qurux badan! Waa nin caqli badan oo daacad ah. Xaqiiqdii wuxuu leeyahay dareen xoolaad, laakiin aad uma dhibsado. Wuxuu kaloo jecel yahay inuu dabbaasho, la ordo oo uu la ciyaaro eeyaha kale, laakiin dhib kama qabo inuu dhinac jiifo intaan wax akhrinayo. Aad ayuu ugu faraxsan yahay inuu haysto. Waxaan aadeynaa park eey maalin kasta ugu yaraan 2 saacadood sidaa darteed wuxuu ku ordi karaa isagoo ciyaaraya / cayrsanaya / xoolo raacaya (wax kastoo uu niyadda ku hayo). Isagu waa mid bulsheed. Waxaan la kulmay dhowr kale oo isku mid ah isku mid ah, dhammaantoodna waxay u muuqdaan kuwo aad u kala duwan, laakiin dhammaantood waxay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan. Xaqiiqdii isku xirnaan weyn waxaan jeclaan lahaa inaan iyaga inbadan helo. '
Si lama filaan ah, maalin maalmaha ka mid ah ayaan eegay eeykeyga oo aanan hubin goorta uu ku dhuftay, laakiin wuxuu noqday eey gebi ahaanba ka duwan! Dhogortiisa ayaa noqotay mid casaan-ka-dahab badan oo ka bunni ah, dabadiisa waxay noqotay mid baalal leh sida Golden Retriever’s, sida dhabarka lugaha oo kale, halkaasoo dhogortiisu aad u qaro weyn tahay. Koodhkiisu xoogaa wuu ka laalaabanayaa dhabarkiisa, xoogaa yarna wuu jilicsan yahay oo eegaya gadaashiisa dhagaha. Xaqiiqdii, qof ayaa mar i weydiiyay haddii aan timo timo? Kaliya waxaan eegay iyaga sidii kuwo waalan. Marwalba waxaan u maleynayay in dabadiisa ay tahay mid gaar ah oo ah inay aad u buuran tahay qiyaastii hal inji ama laba, ka dibna aad u caatowdo. Ma sheegi kartid dhogorta darteed, laakiin waxay ila tahay aniga waxay ila tahay inay noqon karto dhiigiisa Aussie dartiis, iyo xaqiiqda ah in Aussies qaarkood ay ku dhasheen bob-dabada dabiiciga ah. Laakiin, dhammaantiis waan ogahay inay caadi ku tahay eeyaha qaarkood. Frockles badan ayaa u muuqda inay halkan ka soo muuqanayaan wali, oo isna sanka wax casaan ah kuma haysto sanka dambe, kaliya meel ku taal dhinaca sare ee dhexda, iyo bar dhanka bidix ah sidoo kale. Sidoo kale, wuu helay! Maxaa ku dhacay eeygii yaraa? Waan rumaysan kari waayey markii aan u kaxeeyey dhakhtarka xoolaha oo uu culeyskiisu ahaa 92 rodol.! Waxay sidoo kale yiraahdeen wuxuu u baahan yahay inuu miisaanka dhinto, sidaas darteed wuxuu ku jiray xoogaa cunto ah baryahan. '
'Cooper oo sameynaya mid ka mid ah waxyaabaha uu jecel yahay sida ugu fiican ... dabaasha! Wuxuu umuuqdaa mid aad uyar marka hore markuu baxo, oo dhogortiisa dhamaan ku dhajisan tahay jirkiisa, ilaa uu ruxayo, kadib wuxuu ku noqday inuugeyga qalafsan ee doofaarka ah! '
'Cooper wuxuu ka soo dabaashay wabiga dhexdiisa si uu ugu fuulo dhagaxaas. Dhab ahaantii wuxuu jecel yahay inuu fuulo dhagaxyada waxaan u maleynayaa inuu qeyb ka yahay riyaha buuraha! '
'Waana kan Cooper, oo ilaalinaya ushiisa. Wuxuu jecelyahay ulaha. Markii aan xaabada ururinno, Cooper wuxuu u maleynayaa inaan runti qabow nahay oo aan ukeenayno ultiisa shaqsiyeed. Wuxuu si gaar ah u jecelyahay markaad usha tuurto, laakiin inkasta oo uu yahay badh Retriever, hadana kaliya ma helayo qaybta 'retrieve' ee ciyaarta. Wuxuu kaa jeclaan lahaa adiga, ama doorbidka eey kale, cayrsasho oo isku day inaad hesho, iyo marka aad yeelatid, markaa wuu jecel yahay haddii aad ciyaareyso iska ilaali ama is jiidjiidka. Waa nin qosol badan. ''
Cheyenne (Cheye) oo ah Australiyenka Hawlgabka ah ee jira 15 sano— Waxaan helay Cheyenne oo lagu xayeysiinayo Akhriste magaaladeyda anigoo raadinaya eey u tababaro Ey Adeeg ah. Noocyada ku qoran liistada isku dhafka ah ee u dhexeeya laba daahir. Mid Dahab dahab ah , kan kale Adhijirka Ustaraaliya . Waxaan horey u lahaa purebred Aussie kaasoo ahaa wehel weyn, laakiin aad u sarreeyay, ciribtirmay ciribta oo uu ku dhacay xaalad xun kala-go'id walaac . Sababtoo ah waxaan u baahday eey deggan oo ah eey adeeg ah waxaan ujeedo u raadiyay isku dhaf. Tani waxay ahayd dariiqii 1999, sidaa darteed dhammaan kuwa sheeganaya inay alifeen tarankan (iyo taariikh dambe / sanad dambe) waan ka xumahay, adigu ma ahayn adigu. Cheyenne wuxuu u badnaa madow oo cadaan ah iyo qadar yar oo bunni ah (umana eka mid buluug ah, si kastaba ha noqotee), indho bunni ah oo u badan sanka madow (badanaa pink sida pup) oo leh aag qaabeeya qaab casaan oo u dhow salka. Tababar taxaddar leh, oo aan carruurtayda ugu qoro kaaliyeyaal ahaan, Cheyenne wuxuu ahaa caawimaad weyn, wuxuu bartay si dhakhso leh oo aad u fudud. Xitaa intii uu xanuunku socday wali wuxuu qabtay waajibaadyo fudud (shidida laydhadhka, soo helida alaabta) si guuldaro ah Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helay isaga! Wuxuu qalbigayga ku hayaa xusuusyo cajiib ah.
Cheyenne (Cheye) oo ah Cunsuriga Australiyaanka ah ee jira 15 sano
Cheyenne (Cheye) Cunsuriga Australiyaanka ah ee 15 sano jirka ah oo ay la socdaan saaxiibkiisa doggie.
deenish weli Bernard isku darka weyn for sale
alaskan malaamute australia adhijir isku dhafan
american eskimo eey xadka collie mix
eeyaha ma leeyihiin xididdo ciddiyaha
adhijirka Australiya irish wolfhound mix
jack russell terrier papillon iskudhaf
intee le'eg ayay helayaan doofaarrada jilicsan